News Briefs | Fourth Estate®
Nipoaka ny rotaka tany Filadelfia Andrefana taorian'ny fifampitifirana nahafaty an'ireo mainty hoditra ahiahiana
Oktobra 27, 2020 by Fourth Estate Wire
Vahoaka marobe no nidina an-dalambe ary nanomboka nirotaka tao West Philadelphia indray alina taorian'ny nitifiran'ny polisy an'i Philadelphia ka nahafaty olona mainty hoditra nirongo antsy.
Nandresy tamin'ny latsa-bato manapa-kevitra amin'ny maha filoha vaovao an'i Seychelles i Wavel Ramkawalan
Nandresy tamin'ny fifidianana nasionaly i Wavel Ramkawalan ho filoha fahadimin'i Seychelles ary voalohany avy amin'ny mpanohitra tao anatin'ny 43 taona.
Nianiana tany amin'ny Fitsarana Tampony Amerikana i Amy Coney Barrett
Amy Coney Barrett dia nanao fianianana tao amin'ny Fitsarana Tampony tokony ho tamin'ny 9 ora alina tamin'ny 26 Oktobra tamin'ny lanonana tao amin'ny Trano Fotsy, fotoana fohy taorian'ny nanamarinan'ny Antenimieran-doholona azy tamin'ny latsa-bato 52-48.
Nampitandrina ny dokotera fa 'tsy nahafehy' an'i Frantsa ny areti-mifindra COVID-19 rehefa mitombo ny tranga.
"Tsy voafehin'i Frantsa intsony ny valan'aretina herinandro maromaro lasa izay", hoy ny dokotera frantsay Eric Caumes tamin'ny fahitalavitra Franceinfo tamin'ny 26 Oktobra lasa teo, iray andro taorian'ny nahitana tranga vaovao 52,010 i Frantsa.
Nankatoavin'ny Mpandrindra ny Fahasalamana Breziliana ny fanafarana vaksiny sinoa
Oktobra 26, 2020 by Fourth Estate Wire
Ny mpandrindra ny fahasalaman'i Brezila dia nanome alalana tamin'ny alatsinainy maraina ny fanafarana vaksiny mety hiadiana amin'ny COVID-19 avy any Beijing renivohitra Shina, andro vitsivitsy taorian'ny nanambaran'ny filoha breziliana Jair Bolsonaro fa tsy avelan'ny governemantany halefa avy any Chine ny fatrany.
Ny mpahay siansa NASA dia mahita porofo momba ny rano amin'ny volana
Nanambara ny NASA fa nahita dian-drano tamin'ny volana tamin'ny fampiasana Boeing 747 misy teleskaopy napetraka ao aoriana.
Hametraka sazy ho an'i Lockheed Martin, Raytheon ary Boeing i Shina noho ny fifanarahana fitaovam-piadiana amerikana-Taiwan
Nambaran'i Shina ny fikasana hametraka sazy tsy voafaritra amin'ny Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, ary ireo orinasa amerikana hafa tafiditra amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana any Taiwan.
Foibe Fitsaboana any Finlande voajirika, nalaina an-keriny ny marary
Nangalatra angon-drakitra tao amin'ny Centre Psychotherapy Center Vastaamo any Finland ny vondrona mpijirika iray na mpijirika ary nandrahona ny hamoaka vaovao manokana raha tsy voaloa ny vidim-panavotana.
Miantso an'i Erdogan amin'ny fanaovana ankivy ny entana frantsay, ao anatin'ny famoretana ny Islamika
Ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan dia nilaza tamin'ny Tiorka mba hanao ankivy ny entana frantsay rehefa manafoana ny finoana silamo mahery vaika ao amin'ny tanindrazany i Frantsa.
← Previous pejy1 ... pejy1,290 pejy1,291 pejy1,292 ... pejy1,305 Manaraka →
+ BULLETINS VAOVAO MISIMISY
Pejy fandraisana Briefs
Manakatona ny Banner Cookie GDPR